The MYAWADY Daily: October 2016
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားမှုကို ရပ်လိုက်သည်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဆိုးကျိုးများ စတင်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိ
ကျွန်တော်တို့ လူလတ်ပိုင်းတွေ အတွက် အားကစား လေ့ကျင့်ခန်း တွေကို နေ့စဉ်ပုံမှန် လုပ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။
အလုပ်မအားတဲ့ နေ့တွေရှိမယ်၊ အချိန်ရပေမယ့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လွန်း သွားတဲ့နေ့တွေ ရှိမယ်။ ရာသီဥတု အခြေအနေ ဆိုးရွားမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ခန္ဓာ ကိုယ်မှာ တိုးတက်မှု နှုန်းက နှေးလွန်းတော့လဲ ဆက်ကစားဖို့ စိတ်လက်မပါ ဖြစ်မယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်နဲ့ အားကစား လုပ်နေတဲ့ သူတွေက ကိုယ်ထက် အသက် တစ်ဝက်လောက် ငယ်ရင် ငယ်နေတတ် တာမို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျ လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားကစား မလုပ်လို့တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ အချိန် ဘယ်လောက် ကျပ်ကျပ် ရေရအောင် ချိုးသလိုပဲ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲသည် ဖြစ်စေ အားကစား ကိုတော့ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ အားကစား လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာ ရပ်လိုက်တာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘယ်လို အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်ပေါ်သလဲ ဆိုတာ ကြောက်စရာ ကောင်း နေလို့ပါ။
အားကစား လုပ်တာ ရပ်လိုက်ပြီး ၁ဝ ရက်အတွင်းမှာ ဦးနှောက် ပြောင်းလဲမှု စတင်ဖြစ်ပွား ပါတယ်။ အားကစား လုပ်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ် အတွက်တင် မကပဲ ဦးနှောက်အတွက်လဲ ကောင်းပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ် ပျောက်ဆုံးမှုကို သက်သာ စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားကစား လုပ်တာကို ၁၀ ရက်လောက် နားလိုက်တယ် ဆိုရင်ကိုပဲ အားကစားက ထိန်းထားပေးတဲ့ ဦးနှောက် အရည်အသွေးကို ဆုံးရှုံး စပြုလာပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ပင်မ အစိတ်အပိုင်းကို သွေးစီးဆင်းမှု အားနည်းလာ ပါတယ် ။အကျိုးဆက် အနေနဲ့ မေ့တတ်လာပြီး စိတ်ခံစားမှုနဲ့ တုံ့ပြန်မှုအား လျော့နည်း လာပါတယ်။ သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှု အားတွေကအစ လျော့နည်း လာလေ့ရှိပါတယ်။
အားကစားလုပ်တာ ရပ်လိုက်ပြီး နှစ်ပတ် အတွင်းမှာ ခံနိုင်ရည်အားတွေ ကျဆင်းပြီး သက်ဖြစ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေ ယိုင်နဲ့စပြု လာပါတယ်။ လှေကားတွေ တက်ရင် သိသိသာသာ မောလာမယ်၊ အဖော်တွေ လောက် အမြန်မလျှောက် နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ချွေးမထွက် တော့တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က အမြင့်ဆုံး သုံးနိုင်တဲ့ အောက်ဆီဂျင် အဆင့် လျော့သွားလို့ပါ။ နှစ်ပတ် အတွင်းမှာ ကိုယ်တွင်းသက်ဖြစ် အင်္ဂါတွေရဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို စုပ်ယူ နိုင်အား ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းထက် မနည်း ကျဆင်းပါတယ်။ လေးပတ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အောက်ဆီဂျင် စုပ်ယူနိုင်အား ဟာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းသွားပြီး သုံးလ နောက်ပိုင်းမှာ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းသွား နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လုပ်နေကျ အားကစားတွေ ဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးကန်တာ၊ အလေးမတာ၊ ရေကူးတာ တွေကို သွားမလုပ် နိုင်ဘူးဆိုရင်လဲ အနည်းဆုံး ကြိုးခုန်တာ၊ အိမ်မှာပဲ အလေးလွတ် ကစားတာ၊ နောက်ဆုံး ၁၅ မိနစ်လောက် ပြေးတာကို မပျက်မကွက် ပြုလုပ်သင့် ပါတယ်။
အားကစားလုပ်တာ ရပ်လိုက်ပြီး လေးပတ်အတွင်းမှာ ခွန်အားတွေ ယုတ်လျော့ လာပါမယ်။ နဂိုကိုယ်ခံအား နည်းတဲ့လူတွေ ဆိုရင် နှစ်ပတ်လောက် မှာကို အတော်လေး သိသာနေပါပြီ။ ကံကောင်းတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခွန်အား ယုတ်လျော့မှု နှုန်းဟာ ခံနိုင်ရည်အား ယုတ်လျော့မှု နှုန်းထက် နည်းနည်းနှေး တာပါပဲ။ အားကစား လုပ်တာရပ်လိုက်ပြီး ၂၄ ပတ်အထိကို အစားအစာ ကနေတစ်ဆင့် ခွန်အား တိုးတက်မှုတော့ ရှိနေဦးမှာပါ။ ခံနိုင်ရည်အား ကတော့ အားကစား လုပ်ပေးမှပဲ ပြန်တက် လာမှာပါ။
အားကစားလုပ်တာ ရပ်လိုက်ပြီး ရှစ်ပတ်အတွင်းမှာ အဆီစတက် ပါတယ်။ မှန်ထဲမှာ ကြည့်လိုက်ရင်လဲ သင် ဝလာပြီဆိုတာ သိသာလာမှာ ဖြစ်သလို ပေါင်ချိန်စက်ပေါ် တက်လိုက်ရင်လဲ မြားတံက ညာဘက်ကို တိုးတိုးလာ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် ကစားသမားတွေ တောင်မှ နားလိုက်ရင် နားလိုက်တဲ့ အတိုင်း အဆီတက် ပါတယ်။ ဥပမာ ကမ္ဘာကျော် ရေကူးသမား တွေကိုယ်တိုင် ငါးပတ်လောက် နားလိုက်တာ ခန္ဓာကိုယ်အဆီ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း တက်ခဲ့ပါတယ်။ ခါးဆိုဒ်လဲ တုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါတောင် သူတို့ လုံးဝကြီး ထိုင်နေတာ မဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန် လောက်တော့ ရှိခဲ့တာပါ။
ဒီတော့ အားကစား လုပ်တာကို လုံးဝမနားရဘူးလား ဆိုရင် မမှန်ပါဘူး တစ်ပတ်မှာ ခုနစ်ရက် အားကစား လုပ်တာကို ပညာရှင်တိုင်းက ကန့်ကွက် ပါတယ်။ အားကစားလောက ကနေ အပြီးအပိုင် အနားယူတာနဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ နားတာနဲ့ မတူပါဘူး။ အားကစား လောကကနေ အပြီးအပိုင် အနားယူလိုက်ပြီ ဆိုရင် သင်လုပ်နေကျ အားကစား ကိုတော့ မလုပ်နိုင် တော့ဘူးပေါ့။ ဥပမာ မာရသွန် အပြေးသမား တစ်ယောက်ဟာ အပြီးအပိုင် နားလိုက်ပြီဆိုရင် အရင်လို မာရသွန် ၂၆ မိုင်တော့ မပြေးနိုင် တော့ဘူးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်ကို နှစ်မိုင်လောက်တော့ ပြေးနိုင်ဦးမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် စက်ဘီးစီး လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက အားကစား လောကကနေ အပြီးအပိုင် နားရင်လဲ ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းတော့ ရှိကို ရှိရပါတယ်။ အားကစား သမားတွေ အရေးကြီးတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေအတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့ နောက် ပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ နှစ်လလောက် နားရင်နားကြ ပါတယ်။ ချက်ချင်းပဲ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာတာ၊ ဝလာတာ ကို မြင်ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က လေ့ကျင့်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ကောင်းကောင်း သိတဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ လိုအပ်သလို ပြန်ကစားပေး လိုက်ရုံနဲ့လိုချင်တဲ့ ခွန်အား၊ ခံနိုင်ရည် စွမ်းအားနဲ့ကိုယ်အလေးချိန် ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တွေက အားကစားကို အပျော်တမ်းပဲ လုပ်တာဆိုရင် ပြင်ပထွက်ပြီး အားကစား မလုပ်နိုင်တဲ့နေ့ တွေမှာလဲ အနည်းဆုံး မိနစ် ၃ဝ တော့ တစ်ခုခု လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊ ဦးနှောက်နဲ့ ခါးဆိုဒ် တွေက ကိုယ့်ကို ကျေးဇူးတင် ကြမှာဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်ကို နားရက် အနည်းဆုံး တစ်ရက်တော့ နားဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း လေ့လာရေးသား လိုက်ရပါတယ်။ (TMK)
Posted by myawady at 4:56 PM No comments:
Labels: ကျန်းမာသုတ, ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
ရှေးဟောင်းပုံစံ စဉ့်အိုးများ ဟိုတယ်များက မှာယူမှုများပြားလာ
ရွှေဘိုမြို့နယ် ကျောက်မြောင်း မြို့နယ်ခွဲ နွယ်ငြိမ်း၊ ရွှေတိုက်၊ရေဇွန် ကျေးရွာတို့တွင် စဉ့်အိုးအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ရောင်းချ နေသော်လည်း ရှေးဟောင်းပုံစံ အလှအိုး များကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှု ရှိပြီး ဟိုတယ်များက မှာယူမှု များပြား လာကြောင်း အိုးရောင်းသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
အဆိုပါ ရှေးဟောင်း ပုံစံအိုးများကို ရန်ကုန်မြို့၊ ပုဂံ-ညောင်ဦး တို့မှ ဟိုတယ်များက အဓိကထား မှာယူကြပြီး ယခု နောက်ပိုင်းတွင် တောင်ကြီး၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ မြစ်ကြီးနား မြို့တို့ကပါ တင်ပို့နေရကြောင်း သိရသည်။
''ကျွန်တော်က အိုးကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိုးလုပ်တဲ့ ပညာရှင်ခေါ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ပုံစံ လုပ်တာပါ။ မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းမို့ အခက်အခဲ မရှိပေမယ့် ကိုယ်က တီထွင်ပြီး လုပ်တယ်။ ရောင်းရမယ်၊ မရောင်းရဘူး ဆိုတာ မသိဘဲ ဒီပစ္စည်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ ကိုယ့်ဒေသက ပစ္စည်းတွေ အသွင်တစ်မျိုး ပြောင်းစေချင်တာလဲ ပါပါတယ် " ဟု အိုးရောင်းသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ရှေးဟောင်းအိုး ပုံစံကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း စတင်ထုတ်လုပ် ရောင်းချသော်လည်း ဈေးကွက် မရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဈေးကွက်အတွင်း နေရာရလာကာ ယခုအချိန်တွင် ခေတ်စားလာ ကြောင်း သိရသည်။
ရှေးဟောင်းအိုး တစ်လုံး ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင့်ခုနစ်ဆင့်ခန့် ပြုလုပ်ရပြီး ပထမဆုံး မြေများကို ရေဖျော်ပြီး အိုးပုံစံပြုလုပ်ကာ ဒီဇိုင်းရေး ရကြောင်း၊ ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲထားသည့် အိုးများကို နေပူလှန်းပြီး ဖန့်သွားသည့် အခါ ကော်ဖတ်စား ရကြောင်း၊ ထို့နောက် အိုးများကို မီးဖုတ်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ကာ ဆေးရောင်ခြယ် ရကြောင်းနှင့် အိုးတစ်လုံး ပြီးသည်ထိ လေးရက်ခန့် ကြာကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အိုးလုပ်ငန်းတွင် စဉ့်ထည်ပစ္စည်း မျိုးစုံကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထုတ်လုပ်ရာ နွေရာသီတွင် ရောင်းအားကောင်းပြီး ဆောင်းဥတုတွင် လုပ်ငန်း နှေးကွေးကာ မိုးတွင်းကာလတွင် ထုတ်လုပ်မှု မရှိသလောက် နည်းပါးကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့၌ ဒုတိယအကြိမ် လေထု တိုင်းတာခြင်း ပြုလုပ်ပြီးမှသာ ရလဒ်များကို နှိုင်းယှဉ်၍ လေထု ညစ်ညမ်းမှု အမြင့်ဆုံး နေရာကို သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာန လက်ထောက် ဌာနမှူး ဒေါက်တာ အောင်မြင့်မော် ထံမှ သိရသည်။
ထို့ပြင် ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ လေထုတိုင်းတာရေး အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး ပထမအကြိမ် တိုင်းတာရေး အဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလအထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နေရာ ၆၇ နေရာ၌ တိုင်းတာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်း ရလဒ်များအပေါ် မတူညီ၍ အခြေခံ အချက်အလက်များ မှတ်သားထားကာ ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းတာမှု ပြီးစီးပါက လေထုညစ်ညမ်းမှု အမြင့်ဆုံးနေရာ များကို သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
'' ရန်ကုန်မြို့မှာ ပထမအကြိမ် တိုင်းတာတဲ့ ၆၇ နေရာစလုံးက အရင်တစ်ခါမှ မတိုင်းဖူးဘူး။ ဒါက ပထမအကြိမ် တိုင်းတာဖြစ်တဲ့ အတွက် မှန်တယ် ၊ မှားတယ် ပြောလို့ မရသေးဘူး။ ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းတာပြီးမှ ပထမနဲ့ ဒုတိယအကြိမ် စံချိန်စံညွှန်း ရလဒ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောလို့ရမှာပါ'' ဟု ဒေါက်တာ အောင်မြင့်မော် က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ လေထု ညစ်ညမ်းမှုများကို စောင့်ကြည့် လေ့လာရန် ကော်မတီ လက်အောက်ရှိ သုသာန်များနှင့် မီးခိုးထုတ် ခေါင်းတိုင် အားလုံးကို ပေ ၁ဝဝ အထိ မြင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
လေထု တိုင်းတာရေး စက်များကို ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့၌ တစ်လုံး၊ လှည်းတန်း၌ တစ်လုံး နှင့် မင်္ဂလာဒုံ ခရေပင်လမ်းခွဲ ၌ တစ်လုံး စုစုပေါင်း သုံးလုံးကို အထိုင်စက် အဖြစ်ထားရှိပြီး ကျန်တစ်လုံးကို မြို့နယ် များသို့ လှည့်လည် တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးစက်မှုဇုန် (၁) နှင့် (၂)တို့ကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စက်မှုဇုန်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင် သွားမည်
မန္တလေး ၊ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆
မန္တလေးမြို့ရှိ စက်မှုဇုန် (၁) နှင့် စက်မှုဇုန် (၂) တို့၌ နိုင်ငံတကာမှ စိုက်ပျိုးရေး ကုမ္ပဏီများကို ဖိတ်ခေါ်ကာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများ တိုက်ရိုက် ထုတ်လုပ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ စက်မှုဇုန် အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးစက်မှုဇုန် ၌ အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း ၃၉၂ ခု ၊ အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်း ၃၀၄ ခုနှင့် အသေးစား စက်မှုလုပ်ငန်း ၅၉၆ ခု အပါအ၀င် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အတွက် လုပ်ငန်းအုပ်စု အမျိုးအစား ၁၃ ခုဖြင့် လည်ပတ် လျက်ရှိသည်။
''စက်မှုဇုန်တွေ အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ အဓိက က နည်းပညာ အခက်အခဲ ရှိတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်း တွေမှာလည်း စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ အရည်အသွေး ရှိဖို့လိုတယ်။ ဒီလို စက်မှုဇုန်အလိုက် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ပြည်ပက ၀င်ရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လာမှလည်း တောင်သူတွေ အတွက် ပိုမိုဖြန့်ဖြူး ပေးနိုင်မယ်။ လယ်ယာကဏ္ဍ တစ်ခုလုံးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့် သူဆိုရင် နိုင်ငံခြားသား ကို အမြင့်ဆုံး ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ပေးထားတယ်။ နိုင်ငံခြားသားက ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုရဘူး။ အဲဒီလို ပေးထားတဲ့ အခါ ပြည်တွင်းက ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ပါရမယ်ပေါ့။ တချို့ကလည်း ပြည်တွင်းက ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ပါရမယ်ဆိုတာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်သိန်း ၊ နှစ်သိန်းက ပြဿနာ မရှိပေမယ့် ဒေါ်လာသန်း ရာနဲ့ချီတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ပြည်တွင်းက ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ဆိုတာ အကန့်အသတ် ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ဖြေလျှော့ ပေးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ် " ဟု စက်မှု လုပ်ငန်းရှင် ဦးစိုးသာ က ပြောသည်။
စက်မှုဇုန် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအား တင်ပြမှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း များအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက် ဖြစ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကဏ္ဍများကို သီးခြား ဓာတ်အားလိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် ရေဆိုးထုတ် စက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်း တို့ကို စတင်ပြုလုပ် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (၄၄၃)
Labels: စက်မှုလုပ်ငန်း, မန္တလေးသတင်း
ရန်ကုန်မြို့မှ နေ့စဉ်ထွက်ရှိသည့် အမှိုက်တန်ချိန် ၂၀၀၀ အတွက် မီးရှို့စက်တည်ဆောက်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၆၀၀ ခန့် ကုန်ကျမည်
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီ နယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ မြို့နယ် အသီးသီးမှ နေ့စဉ် ထွက်ရှိသည့် အမှိုက်တန်ချိန် ၂ဝဝဝ အတွက် အမှိုက်မှ လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်နိုင် မည့် မီးရှို့စက် တည်ဆောက်ပါက အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ ခန့် ကုန်ကျနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သန့်ရှင်းရေး ဌာနမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ နေ့စဉ် ထွက်ရှိသည့် အမှိုက်တန်ချိန် ၂ဝဝဝ ကို မီးရှို့ပါက ရန်ကုန်မြို့၌ လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ် ၁၅ဝ မဂ္ဂါဝပ် ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် တည်ဆောက် သင့်ကြောင်း လက်ထောက် ဌာနမှူး ဒေါက်တာ အောင်မြင့်မော် က ပြောသည်။
" ရန်ကုန်မြို့ အနေနဲ့ ဆိုရင် မီးရှို့စက် တည်ဆောက်သင့် ပါတယ်။ အမှိုက်တန်ချိန် ၂ဝဝဝ ကို မီးရှို့ရင် လျှပ်စစ် ၁၅၀ မဂ္ဂါဝပ် ရနိုင်တဲ့အတွက် နေ့စဉ် အမှိုက်တန်ချိန် ၂ဝဝဝ မီးရှို့မယ် ဆိုရင် ရရှိမယ့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားနဲ့ တန်ပါတယ်'' ဟု ဒေါက်တာ အောင်မြင့်မော် က ပြောသည်။
အဆိုပါ မီးရှိုးသည့် စက်ကို ရန်ကုန်မြို့၌ တည်ဆောက်သင့် သော်လည်း လတ်တလော တွင် တည်ဆောက်ရန် မသိရှိနိုင် သေးကြောင်း၊ ထို့ပြင် ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် လှော်ကားဥယျာဉ် အနီး၌ တည်ဆောက် လျက်ရှိသည့် တစ်နေ့လျှင် အမှိုက်တန် ၆ဝ မီးရှို့နိုင်သော အမှိုက် မီးရှို့စက်မှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈ သန်း ၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈ သန်းလှူဒါန်း မှုဖြင့် စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၆ သန်း အကုန်အကျခံ တည်ဆောက် နေကြောင်း သိရသည်။
လတ်တလောတွင် ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ နေ့စဉ်ရရှိသည့် အမှိုက်များကို ထားဝယ်ချောင် ၌ တန် ၇ဝဝ၊ ထိန်ပင်၌ တန် ၉ဝဝ၊ ရွှေပြည်သာ တောကျောင်း ကလေး၌ တန် ၃ဝဝ ခန့်၊ ရွှေပြည်သာ ကျူချောင်၌ တန် ၆ဝ မှ ၇ဝ ခန့်၊ ဒလ၌ ၂၅ တန်မှ တန် ၃ဝ၊ ဆိပ်ကြီး ခနောင်တို ၌ ငါးတန်ခန့် စုစုပေါင်း တန် ၂ဝဝဝ အား ပုံထားရလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ (နေနေ)
Labels: စွမ်းအင်ကဏ္ဍ, ရန်ကုန်သတင်း
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Shan Xi ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စင်္ကြာမုနိ လက်ရိုးတော်ဘုရား သို့ သွားရောက်ဖူးမြော်
Bao Ji မြို့ရှိ စင်္ကြာမုနိ လက်ရိုးတော်ဘုရား (Fa Man Si) ကို ဖူးတွေ့ရစဉ်
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ လက်ရိုးတော် အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဖူးမြော်ကြည်ညိုစဉ်
ဆရာတော်ထံ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းစဉ်
ဘုရားကျောင်းရှေ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်စဉ်
နေပြည်တော် ၊ ၃၁-၁၀-၂၀၁၆
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ရှီအန်းမြို့တွင် ရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့နံနက် ပိုင်းတွင် Shan Xi ပြည်နယ်၊ Bao Ji မြို့ရှိ စင်္ကြာမုနိ လက်ရိုးတော် ဘုရား (Fa Man Si) သို့ မော်တော်ယာဉ် များဖြင့် သွားရောက် ဖူးမြော်ကြည်ညိုကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နှင့်အဖွဲ့ဝင် များသည် ဘုရားကျောင်းဝင်း အတွင်း ဘာဂီယာဉ်ငယ် များဖြင့် လှည့်လည် ကြည့်ရှုကြသည်။ ယင်းနောက် ဘုရားကျောင်းဆောင် အတွင်း ကိုးကွယ် ထားရှိသည့် ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်မြတ်နှင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရား၏ လက်ရိုးတော် တို့အား ဖူးမြော်ကြည်ညို ကြပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က အလှူငွေ များအား ဆရာတော်ထံ ပေးအပ်လှူဒါန်းသည်။
ထို့နောက် ဘုရားကျောင်းရှေ့ ၌ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လက်ညှိုးအရိုးတော် မူလကိန်းဝပ် စံပယ်ခဲ့သည့် ကျောင်းဆောင်ဟောင်း သို့ သွားရောက်ဖူးမြော် ကြည်ညိုကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် က အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း၍ ဘုန်းတော်ကြီး များနှင့် အမှတ်တရဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးသည်။
တာဝန်ရှိသူများ၏ ရှင်းလင်း ပြောကြားချက် အရ အဆိုပါ ဘုရားကျောင်းတွင် ကိုးကွယ် ထားရှိသည့် ဗုဒ္ဓ လက်ရိုးတော်မှာ မြတ်စွာဘုရား ၏ လက်ဝဲ ဘက်လက် ခလယ်၏ ဒုတိယအဆစ် အရိုးတော်အစစ် ဖြစ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၁၈ဝဝ ခန့်က စတင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်၍ ကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မူလကိန်းဝပ် စံပယ်သည့် ဘုရားကျောင်းအား ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း၊ လက်ရှိ ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးအား ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Myanmar Tatmadaw goodwill delegation led by Senior General Min Aung Hlaing pays homage to Buddha Image at Famen temple in Shan Xi Province
Senior General Min Aung Hlaing poses for documentary photo together with abbots in front of Fa Man Si.
The Myanmar Tatmadaw goodwill delegation led by Commander-in- Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing who is onagoodwill visit to China visited Fa Man Si (Famen temple) in Bao Ji in Shan Xi Province, China yesterday morning.
First, the Senior General and party looked round the temple compound by buggies. Then, they paid homage to the Buddha image and the sacred bone relic of the Buddha in the temple, and the Senior General donated cash to the abbot.
Afterwards, the Senior General and party posed for documentary photo in front of the temple and then visited the old temple where the finger bone relic of lord Buddha was previously housed.
The Senior General donated money and had documentary photo taken with the abbots there.
According to the explanations of officials, the finger bone relic in the Famen temple is the middle finger of the left hand of the Buddha. The bone relic has been conserved since about 1800 years. The old temple was built in 1987 and the new temple, in 2009.
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သံရုံး/စစ်သံရုံး မိသားစုများနှင့် သင်တန်းသားများအား ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သင်တန်းသားများ ၊ သံရုံး/စစ်သံရုံး မိသားစုများအား တွေ့ဆုံအမှာစကား ပြောကြားစဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် စစ်သံရုံးမိသားစုများအတွက် အမှတ်တရပစ္စည်းများ ပေးအပ်စဉ်
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရှီအန်းမြို့မှ ပေကျင်းမြို့သို့ တရုတ်ပြည်သူ့
လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် အထူးလေယာဉ် ဖြင့် ဆက်လက် ထွက်ခွာရာ Lintong လေဆိပ်၌ Shan Xi ပြည်နယ် ဒုတိယစစ်ဒေသမှူး Major General Li Shengli နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများက ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက် ကြသည်။
ယမန်နေ့ ညပိုင်းတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံး သို့ ရောက်ရှိကြရာ သံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ သင်တန်း တက်ရောက် နေကြသည့် သင်တန်းသား များနှင့် သံရုံး/ စစ်သံရုံး မိသားစုများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က သံရုံး ဧည့်ခန်းမတွင် သင်တန်းသားများ၊ သံရုံး/ စစ်သံရုံး မိသားစုများအား တွေ့ဆုံ အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် သင်တန်းသားများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ် အလိုက် အခြေခံ ကောင်းမွန်ကြ သူများဖြစ်၍ အဆင့်မြင့် အတတ်ပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာများ ပိုမိုတတ်ကျွမ်း စေရန်အတွက် အလေးအနက် ထား၍ ကြိုးစား အားထုတ် လေ့လာသင်ကြား ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် နှင့်တပ်မတော်မှ အချိန်၊ လုပ်အား၊ ငွေကြေးများစွာ ကျခံစေလွှတ် ပေးခြင်းဖြစ်၍ တန်ဖိုးထားပြီး ကြိုးစားကြရန် လိုကြောင်း၊ တပ်မတော်၏ အစဉ်အလာ ဖြစ်သည့် အမိန့်နာခံမှု၊ စည်းကမ်း ကောင်းမွန်မှု နှင့် လူတိုင်းတွင် ကိန်းအောင်းလျက် ရှိသော မျိုးချစ်စိတ် များသည် မိမိတို့၏ လုံ့လ၊ ဝီရိယ၊ ကြိုးစား အားထုတ်မှုများ၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု များအပေါ် မူတည်၍ ခိုင်မာမှု ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အလားတူ Rule and Regulation များကို ထိန်းသိမ်း လိုက်နာဖို့ လိုကြောင်း၊ သွားသင့်သည့် နေရာကိုသွား၊ ပေါင်းသင့်သည့် လူကိုပေါင်း၊ ပြောသင့်သည့် စကားကိုပြော၊ လုပ်သင့်သည့် အရာကိုလုပ် ဆိုသည့် သင့်လေးသင့်နှင့် အညီ လိုက်နာ နေထိုင်ကြ ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို သာမက မိမိကွပ်ကဲရသူ များကိုပါ အလိုမလိုက် ကြရန်မှာကြား လိုကြောင်း၊ သံတမန်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း နှစ်နိုင်ငံ၏ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန် စေရန် လုပ်ဆောင်ကြခြင်း ဖြစ်၍ လွန်စွာ ကျယ်ပြန့်ကြောင်း၊ အရှည်ကို မျှော်တွေးပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသား များအတွက် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင်ကြ ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်ရှိ နေကြသည့် မိမိနိုင်ငံသား များကိုလည်း အမိအဖသဖွယ် စိတ်စေတနာ ထား၍ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သံတမန်ရေးတွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး စသည်ဖြင့် အခန်းကဏ္ဍ များစွာ ရှိခြင်းကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ပိုမိုတိုးတက် အောင်မြင်အောင် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ကြ စေလိုကြောင်းဖြင့် တိုက်တွန်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က အမှတ်တရ ပစ္စည်းများနှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်ရာ သံအမတ်ကြီး နှင့်ဇနီး၊ သံရုံး အမှုထမ်းများ၊ စစ်သံမှူးနှင့် ဇနီး၊ စစ်သံရုံး အမှုထမ်းများ နှင့် သင်တန်းသား များက လက်ခံရယူ ကြသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား သံရုံး မိသားစုများက ညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Shan Xi ပြည်နယ် စစ်ဒေသမှူး Maj. Gen. Gao Longfu မှ တည်ခင်းဧည့်ခံသော ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် Shan Xi ပြည်နယ်
စစ်ဒေသမှူး Maj. Gen. Gao Longfu တို့ တွေ့ဆုံစဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်
ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား Shan Xi ပြည်နယ် စစ်ဒေသမှူး
Maj. Gen. Gao Longfu က ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံစဉ်
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး အလည်အပတ် ရောက်ရှိ နေသည့် မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် ညပိုင်းတွင် Shan Xi ပြည်နယ် စစ်ဒေသမှူး Maj. Gen. Gao Longfu မှ Xian မြို့ Hyatt Regency ဟိုတယ် Grand Ball Room ၌ ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်၍ တက်ရောက်သည်။
ဦးစွာ ဟိုတယ် ဧည့်ခန်း၌ မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့် Shan Xi ပြည်နယ် စစ်ဒေသမှ တာဝန်ရှိသူများ မိတ်ဆက် တွေ့ဆုံကြသည်။ ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် စစ်ဒေသမှူး Maj. Gen. Gao Longfu က Shan Xi ပြည်နယ်နှင့် Xian မြို့တို့၏ နယ်မြေဒေသ အခြေအနေများ၊ ထူးခြားချက်များနှင့် လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေမှု တို့အား ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က သမိုင်း အစဉ်အလာ ကြီးမား၍ ထူးခြားသော နယ်မြေဒေသသို့ လာရောက် လည်ပတ်ခွင့် ရရှိ၍ ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း၊ ကောင်းမွန်သည့် နောက်ခံ အကြောင်းအရာ များရှိသော ပြည်နယ်ဒေသ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ယခုထက် ပိုမို၍ တိုးတက်လာမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြန်လည် ပြောကြားပြီး အထိမ်းအမှတ် ပစ္စည်းများ အပြန် အလှန် လဲလှယ်ကြသည်။
ယင်းနောက် ပြည်နယ် စစ်ဒေသမှူးမှ ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံရာ Maj. Gen. Gao Longfu နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တို့က ဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက် စကားများ ပြောကြား ကြသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက် လာသူများနှင့် အတူ ရင်းရင်းနှီးနှီး ညစာ သုံးဆောင်ကြပြီး ညစာ သုံးဆောင်နေစဉ် အတွင်း ရိုးရာတေးဂီတ များဖြင့် တီးမှုတ်ဖျော်ဖြေ ကြသည်။ ညစာ သုံးဆောင်ပြီးချိန် တွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ် စစ်ဒေသမှူး တို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီးနောက် တက်ရောက် လာသူများ နှင့်အတူ စုပေါင်း၍ အမှတ်တရဓာတ်ပုံ ရိုက်ကြသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် Xian မြို့တွင်း ရှိ Tang Le Gong ကပွဲရုံသို့ သွားရောက်ပြီး Tang မင်းဆက် ခေတ်ကာလ အဆိုအကဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှု အစီအစဉ်များအား ကြည့်ရှုအားပေး ခဲ့ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ
Xian မြို့တွင်းရှိ Tang Le Gong ကပွဲရုံတွင် Tang မင်းဆက် ခေတ်ကာလအဆိုအက
ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရှု အားပေးစဉ်
ယင်းဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုများသည် လွန်စွာ ခမ်းနား ကောင်းမွန် သောကြောင့် ရှီအန်းမြို့သို့ လာရောက်ကြသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည်များ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဖြင့် သွားရောက် ကြည့်ရှုကြသည့် အထင်ကရနေရာ တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Senior General Min Aung Hlaing attends dinner hosted by Shan Xi Province Military Region commander Maj. Gen. Gao Longfu
Senior General Min Aung Hlaing holds talks with Shan Xi Province Military Region Commander Maj. Gen. Gao Longfu before the dinner.
Maj. Gen. Gao Longfu, the Commander of Shan Xi Province Military Region hostedadinner honouring the Myanmar Tatmadaw goodwill delegation led by Commander- in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing who is onagoodwill visit to China, at Grand Ballroom of the Hyatt Regency Hotel in Xian of China in the evening of October 29.
The Myanmar Tatmadaw goodwill delegation and officials from the Shan Xi Province Military Region formally introduced to each other. At the call, Maj. Gen. Gao Longfu explained situations, distinct features and current undertaking of Shan Xi Province and Xian. The Senior General said he took pride for havingachance to visitahistoric and distinct region. He believed that the region would see more development as it had fine historical backgrounds. Both sides exchanged gifts.
Afterwards, Maj. Gen. Gao Longfu and the Senior General extended greetings at the dinner. Then, the Senior General enjoyed the dinner together with all attendees. During having the dinner, the guests were entertained with traditional music. After the dinner, the Senior General and the military region commander exchanged gifts and posed for group documentary photo. Afterwards, the Senior General and party went to the Tang Le Gong theatre in Xian and enjoyed music and dance there.
That theatre isapopular destination as its music and dance shows can attract local and foreign tourists visiting Xian.
31-10-2016-MyawadyDaily+ by TheMyawadyDaily on Scribd
31-10-2016-Yadanarpon by TheMyawadyDaily on Scribd
အမေရိကန်နိုင်ငံက ပေးသည့် GSP တွင် ပို့ကုန်အမည် ၅၀၀၀ နီးပါး အခွန်ကင်းလွတ်ခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အရည်အသွေးပိုင်း ထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်ရမည်
ရန်ကုန် ၊ ၃၀-၁၀-၂၀၁၆
အမေရိကန်နိုင်ငံ က ပေးသည့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အရေး (GSP) တွင် ပို့ကုန်အမယ် ၅ဝဝဝ နီးပါး အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အရည်အသွေးပိုင်း ထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ကို နိုဝင်ဘာလလယ်တွင် စတင်ရရှိမည် ဖြစ်သောကြောင့် ပို့ကုန်များ၏ အရည်အသွေးပိုင်း ထိန်းသိမ်းခြင်းကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။
''ကျွန်တော်တို့က ဈေးကွက်တော့ ပွင့်သွားပြီ။ ဈေးကွက်ရဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ ခုလို GSP ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အတွက် တကယ့်ကို မင်္ဂလာသတင်း ပါပဲ။ စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အတွက် စိုက်ပျိုးရေး ကုန်စည်တွေကိုပဲ အဓိကတင်ပို့ သွားမှာပါ'' ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အစုအဖွဲ့ မှ ဦးနိုင်လင်းစိုး ကပြောသည်။
''ဒီနှစ်ထဲမှာ စာချုပ်ချုပ်ဖြစ်မယ် ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ချက်ချင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပဈေးကွက် ကနေ ဂျပန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယား ဈေးကွက် တွေအထိ ရောက်သွား နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို
ရောက်သွားတာက အမေရိကန် တို့က ပြန်ပြီး GSP ပေးလိုက်တဲ့ အတွက် ဟိုဘက် ဈေးကွက်တွေက လျော့သွားမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အဲဒါကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ လက်ရှိရနေတဲ့ အာရှဈေးကွက် ကလည်းရမယ်၊ အနောက်နိုင်ငံ တွေ ဈေးကွက်ကလည်း ရမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့ စာချုပ်ချုပ်ဖြစ် လာမှာပါ'' ဟု ပြည်တွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဦးစိုင်းနောင် က သုံးသပ်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမေရိကန် စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် သြဂုတ်လကုန် အထိ လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၇ ခုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄၈ သန်း ရှိကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန စာရင်းများအရ သိရသည်။ ( ဇာဏီ )
၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလမှစတင်ကာ သစ်အချောထည်နှင့် အကြမ်းထည်များ ပြည်ပတင်ပို့မှုကို ရပ်ဆိုင်းမည်
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မေလမှ စတင်ကာ သစ်အချောထည် နှင့် အကြမ်းထည်များ ပြည်ပ တင်ပို့မှုကို ရပ်ဆိုင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောထွက် ပစ္စည်း လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ထံမှ သိရသည်။
သစ်ခွဲသား၊ သစ်လုံးများ၊ သစ်အချောထည် နှင့် သစ်အကြမ်းထည် များကို ပြည်ပ တင်ပို့မှု ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောထွက် ပစ္စည်း လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးဝင်း က ''၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မေ ၁ ရက်ကစပြီး ပြည်တွင်း ရောင်းဝယ်ရေး နှင့် သစ်စက်ဌာန က ရောင်းချပေးတဲ့ သစ်လုံးတွေနဲ့ သစ်ခွဲသား တွေကို ပြည်ပတင်ပို့မှု ရပ်ဆိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆို ကုန်ကြမ်း ရှားလာတယ်။ ပြည်တွင်းသုံး ဆိုပြီး ရောင်းတဲ့အခါမှာ ပြည်တွင်းသုံး သစ်တွေကို ပြည်ပပို့တဲ့ အတွက် ပြည်တွင်းမှာ သစ်သုံးစွဲမှု လုံလောက်မှုမရှိမှာကို စိုးရိမ် နေရပါတယ်။ ပြည်တွင်း သုံးစွဲမှု ဖူလုံစေချင်လို့ ပြည်တွင်းအတွက် ရောင်းတဲ့ သစ်တွေကို ပြည်တွင်းမှာပဲ သုံးစွဲစေချင် ပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
ပြည်ပသို့ သစ်ခွဲသား၊ သစ်လုံးများ၊ သစ်အကြမ်းထည် နှင့် သစ်အချောထည် များ တင်ပို့မှုမှာ ကုန်ကြမ်း ရှားပါးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် တိုးမြင့် လာမှုကြောင့် တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် လျော့နည်း လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်ပသို့ သစ်ခွဲသားများ တင်ပို့မှု လျော့နည်း လာကြောင်း၊ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်တွင် သစ်အသုံးပြု မှုနှင့် ရောင်းချမှု မလုံလောက် မှုများ ထပ်မံမကြုံ စေလို၍ ပြည်ပတင်ပို့ ရောင်းချမှုကို သယံဇာတ နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနက ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (၄၄၃)
တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးတပ် များမှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် ဆရာ ၊ ဆရာမ ၊ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ စခန်းချလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းဆင်းပွဲများ ကျင်းပ
ရမည်းသင်းမြို့နယ် နယ်မြေခံလေ့ကျင့်ရေးး သင်တန်းကျောင်း ၌ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်
တက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ဆရာ ၊ ဆရာမ ၊ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ
စခန်းချလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပစဉ်
အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မျိုးဝင်း သင်တန်းများအလိုက်
ထူးချွန်ဆုရရှိခဲ့သော သင်တန်းသား တစ်ဦးကို ဆုပေးအပ်စဉ်
တိုက်ကြီးမြို့နယ် နယ်မြေခံ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း၌ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ဆရာ ၊ ဆရာမ ၊ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ၏ စခန်းချလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းဆင်းပွဲ တွင် တက်ရောက် လာကြသူများနှင့် သင်တန်းသား ၊ သင်တန်းသူများ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်စဉ်
နေပြည်တော် ၊ ၃၀-၁၀-၂၀၁၆
နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အတွက် လေ့ကျင့်သား ပြည့်ဝသည့် ကာကွယ်ရေး အရန်အင်အားစု အဖြစ် တည်ဆောက်ရန် အတွက် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)၊ ပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်ခြားတပ်များ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ၏ တက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေး တပ်များမှ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင်နှစ်၊ တက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၄၁၁ ဦးအား အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် စခန်းချ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးခဲ့ပြီး ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် သင်တန်းဆင်းပွဲ များကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ပင်လောင်းမြို့နယ် များရှိ နယ်မြေခံ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း များ၌ အသီးသီး ပြုလုပ် ကြသည်။
သင်တန်းဆင်းပွဲ များသို့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် များမှ တိုင်းမှူးများနှင့် သင်တန်း နည်းပြများ၊ တက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ တက်ရောက်ကြပြီး တိုင်းမှူးများက သင်တန်းဆင်း အမှာစကားများ ပြောကြား ကြသည်။
ထို့နောက် တိုင်းမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက သင်တန်းများ အလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသော သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ များနှင့် အောင်မြင်စွာ သင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ်များ အသီးသီးပေးအပ် ကြသည်။
အဆိုပါ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင်နှစ်၊ တက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များ၏ စခန်းချ လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းများကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ ၂၉ ရက်အထိ ၅ ပတ်ကြာ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးခဲ့ပြီး သင်တန်းကာလ အတွင်း စစ်နည်းဗျူဟာ ဘာသာရပ်၊ လက်နက်ငယ် ဘာသာရပ်များ၊ ကိုယ်စီ စစ်မြေပြင် ကျွမ်းကျင်မှု ဘာသာရပ်နှင့် စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် များအပြင် ကိုယ်လက် ကြံ့ခိုင်မှု လေ့ကျင့်ခန်း၊ လက်တွေ့ ပစ်ခတ်စဉ် လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အတားအဆီးများ ဖြတ်ကျော်မှု လေ့ကျင့်ခန်း တို့ကိုပါ သင်ကြားလေ့ကျင့် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ Shan Xi ပြည်နယ် ၊ Hang Zhong မြို့ ၊ Xian မြို့များသို့ ရောက်ရှိလေ့လာ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ Xian မြို့ရှိ ချင်းရှီဟွမ် ဘုရင့်စစ်သည်တော် ရုပ်တုများအား လေ့လာစဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Shan Xi ပြည်နယ် ၊ Hang Zhong မြို့ ၊ Chenggu လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိရာ CATIC ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ Mr. Yang Ying နှင့် တာဝန်ရှိသူများက
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့်အဖွဲ့ CATIC ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည့် Y-9E သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ်ကို ကြည့်ရှုလေ့လာစဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့်အဖွဲ့ Y-9E သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ်နှင့် အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်စဉ်
Xian မြို့ရှိ ချင်းရှီဟွမ်ဘုရင့် စစ်သည်တော်ရုပ်တုများကု တွေ့ရစဉ်
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကူမင်းမြို့တွင် ရောက်ရှိနေသော တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့ ဒေသ စံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီတွင် ကူမင်းမြို့၊ Chang Shui အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ဆက်လက် ထွက်ခွာရာ လေဆိပ်၌ ယူနန်ပြည်နယ် ဒုတိယ စစ်ဒေသမှူး Major General Qu Xin Yong နှင့်တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ ကူမင်းမြို့ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးစိုးပိုင် နှင့် တာဝန်ရှိသူ များက ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက် ကြသည်။
ယင်းနောက် ဒေသ စံတော်ချိန် နံနက် ၁ဝ နာရီ ၄ဝ မိနစ်တွင် Shan Xi ပြည်နယ်၊ Hang Zhong မြို့၊ Chenggu လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ CATIC ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ Mr. Yang Ying နှင့် တာဝန်ရှိသူ များက ကြိုဆိုကြသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် နှင့်အဖွဲ့သည် CATIC ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည့် Y-9E သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လေယာဉ်အား ကြည့်ရှုလေ့လာ ကြပြီး အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်သည်။ ထို့နောက် ကုမ္ပဏီ၏ ရှင်းလင်းဆောင်တွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့အား CATIC ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူ များက ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ လေယာဉ် ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ များအား ရှင်းလင်း တင်ပြရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များက သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်း ဆွေးနွေးကြသည်။ ၄င်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တို့သည် အထိမ်းအမှတ် လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် Xian မြို့၊ Lintong လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ Shan Xi ပြည်နယ် ဒုတိယ စစ်ဒေသမှူး Major General Li Shengli နှင့်တာဝန်ရှိသူ များက ကြိုဆိုကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့်အဖွဲ့ဝင် များသည် Xian မြို့ရှိ ချင်းရှီဟွမ် ဘုရင့်စစ်သည်တော် ရုပ်တုများအား သွားရောက် လေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူ များက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသကြသည်။ အဆိုပါ စစ်သည်တော် ရုပ်တုများအား တရုတ်ပြည်၏ ဘုရင်တစ်ပါး ဖြစ်သည့် ချင်းရှီဟွမ် ဘုရင်က လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂ဝဝဝ ကျော် ဘီစီ ၂၄၆ ခုနှစ်က စတင်ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး ၁၁ နှစ်ခန့် ကြာမြင့်အောင် ထုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ ရုပ်တုများအား ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် Xian မြို့ရှိ လယ်သမားများက ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ စစ်သည်ရုပ်တု များနှင့် မြင်းရုပ်တု ပြတိုက် စတင်ဆောက်လုပ် ခဲ့ပြီး ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါပြတိုက် သည် စတုရန်းမီတာ ၁၆၃ဝဝ ကျယ်ဝန်းပြီး တွင်းကြီး ၃ ခုအတွင်းမှ ချင်းရှီဟွမ် ဘုရင်၏ ဂူသင်္ချိုင်း အပါအဝင် စစ်သည် ရုပ်တုပေါင်း ၈ဝဝဝ ကျော်နှင့် စစ်ရထားရုပ်များ၊ မြင်းရုပ်များ၊ မြင်းစီးစစ်သည် ရုပ်တုများ၊ လက်နက်များကို စနစ်တကျ တူးဖော် ထိန်းသိမ်းထားရှိ ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၄င်းကို ၁၉၈၇ ခုနှစ် တွင် UNESCO မှ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ် တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခဲ့ပြီး ရှေးဟောင်း တရုတ်လူမျိုး တို့၏ ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုကို ထိန်းသိမ်းပြသ ထားသည့် နေရာတစ်ခု ဖြစ်ကာ နေ့စဉ်လာရောက် လေ့လာသူ ၃ဝဝဝဝ ခန့်ရှိကြောင်း၊ နေ့ထူးနေ့မြတ် များတွင် တစ်သိန်းကျော် အထိလာရောက်လေ့လာကြကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ပြတိုက်အတွင်း လှည့်လည် ကြည့်ရှုပြီးနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် ပြတိုက် ဧည့်သည်တော် မှတ်တမ်း၌ မှတ်တမ်းတင် လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
30 10 2016 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
30-10-2016 Yadanarpon by TheMyawadyDaily on Scribd
Posted by myawady at 10:54 AM No comments:
Political Commissar of Yunnan Military Region hosts dinner to Myanmar Tatmadaw goodwill delegation
Senior General Min Aung Hlaing speaks words of thanks at the dinner.
A dinner was hosted in honour of the Myanmar Tatmadaw goodwill delegation led by Commander-in- Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing who is onagoodwill visit to China by Maj. Gen. Yu Kun, Political Commissar of Yunnan Military Region at Zhongwei Hotel Ballroom in Kunming at 6.30 pm local standard time yesterday.
Also attending the dinner together with the Myanmar Tatmadaw goodwill delegation were senior officers of the People’s Liberation Army and Yunnan Military Region. First, Maj.Gen. Yu Kun extended greetings in honour of the delegation in welcoming it. He, then, enjoyed the dinner together with all the attendees inacordial atmosphere.
After the dinner, Senior General Min Aung Hlaing thanked the hosts for their hospitality, stressing the need to forge bilateral cooperation through understanding and awareness for further strengthening friendship at the common border. Later, Senior General Min Aung Hlaing and Maj. Gen. Yu Kun exchanged gifts and posed foragroup documentary photo.
မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၊ ယူနန်ပြည်နယ် ၊ ကူမင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိ ၊ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ သို့ သွားရောက်လေ့လာ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အား တာဝန်ရှိသူများက
ယူနန်ပြည်နယ် ၊ ကူမင်းမြို့ ၊ Chang Shui အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြစဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Tibetan Village ရှိ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ
တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ အတွင်း ကြည့်ရှုလေ့လာကြစဉ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Xi Shan ဒေသ Guo Lin ရွာရှိ
စိုက်ပျိုးရေးခြံတွင် Green House များဖြင့် စတော်ဘယ်ရီသီး များအား တစ်သျှူးမျိုးပွားစနစ် ဖြင့်
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟို စစ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်၊ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် Gen.Fang Fenghui ၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ချစ်ကြည်ရေးခရီး လည်ပတ်ရန် ယမန်နေ့ ဒေသ စံတော်ချိန် ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ကူမင်းမြို့၊ Chang Shui အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ တရုတ်ပြည်သူ့ တပ်မတော်၊ နိုင်ငံတကာ စစ်ဘက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ရုံး၏ စစ်ကော်မရှင် နာမင်းကြီး Maj. Gen. Wu Xiao Yu ၊ ယူနန်စစ်ဒေသ ဒုတိယစစ် ဒေသမှူး Maj.Gen.Qu Xin Yong နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်း ၊ ကူမင်းမြို့ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးစိုးပိုင် ၊ စစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် တင့်ဆန်း နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ကူမင်းမြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက် တွင်ရှိသော Yunnan Ethnic Village သို့ သွားရောက် လေ့လာကြသည်။ ဦးစွာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် Tibetan Village သို့ရောက်ရှိပြီး ရွာအတွင်း နှင့် ဘုရားကျောင်း တို့အား လှည့်လည် ကြည့်ရှုရာ တာဝန်ရှိသူ များက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသသည်။
ဆက်လက်ပြီး Naxi Village ၊ Bai Village ၊ Yi Village နှင့် Dai Village တို့အား လေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူ များက တိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာ အဆောက်အဦများ၊ အနုပညာ လက်ရာများ၊ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အဆိုအကများဖြင့် ရှင်းလင်းပြသ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ကြသည်။ ယင်း တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာအတွင်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၂၅ ခု၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ များအား သဘာဝရှုခင်း သာယာလှပမှု များဖြင့် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထားရာ လာရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာကြသူ များစွာရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် Xi Shan ဒေသ Guo Lin ရွာရှိ စိုက်ပျိုးရေးခြံ တစ်ခြံအား သွားရောက်လေ့လာ ကြသည်။ အဆိုပါ စိုက်ပျိုးရေးခြံတွင် Green House များဖြင့် စတော်ဘယ်ရီသီး များအား တစ်သျှူးမျိုးပွား စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးထားပြီး ချောကလက် အနံ့၊ ဘလူးဘယ်ရီ အနံ့၊ နာနတ်အနံ့၊ နို့အနံ့ စသည် ဖြင့် ဖန်တီးစိုက်ပျိုး ထားသည်။ ယင်းစိုက်ပျိုး ရေး ခြံတွင် စတော်ဘယ်ရီပင် များအား နိုင်ငံခြား မျိုးနှင့် ဒေသမျိုးများ သီးခြားစိုက်ပျိုး ထားရှိပြီး ငါးသေးငါးဖွဲ များနှင့် ပြုလုပ်သည့် သဘာဝ ဓာတ်မြေသြဇာ အသုံးပြုကြောင်း၊ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် စတင် စိုက်ပျိုးခဲ့ရာ အောက်တိုဘာ လတွင် အသီးဆွတ်ခူး နိုင်ကြောင်း၊ အထွက်နှုန်းလည်း ကောင်းမွန်ပြီး စိုက်ပျိုးခြံတွင် စတော်ဘယ်ရီပင် ၃ ဧက စိုက်ပျိုးထားရာ ၁ ဧကလျှင် တရုတ်ယွမ်ငွေ ၃ သောင်းမှ ၁ သိန်းအထိ ဝင်ငွေ ရရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Myanmar Tatmadaw goodwill delegation arrives in Kunming, Yunnan Province of PRC, visits Ethnic Village
Senior General Min Aung Hlaing being welcomed by Maj.Gen .Wu Xiao Yu, Commissioner of the International Military Cooperation Office of Central Military Commission of China at Chang Shui International Airport in Kunming.
Senior General Min Aung Hlaing and party pose for documentary photo at Yunnan Ethnic Village.
The Myanmar Tatmadaw goodwill delegation, led by Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing, arrived at Chang Shui International Airport in Kunming, Yunnan Province, the People’s Republic of China, at 12.15 pm local standard time today at the invitation of Central Military Commission Member Chief of the Joint Staff of the People’s Liberation Army of China Gen. Fang Fenghui. The delegation was welcomed at the airport by Maj. Gen. Wu Xiao Yu, Commissioner of the International Military Cooperation Office of the Central Military Commission of PLA, Deputy Commander of Yunnan Military Region Maj. Gen. Qu Xin Yong and senior military officers, Myanmar Ambassador to China U Thit Lin Ohn, Consul General of Kunming U Soe Paing, Military Attaché Brig-GenTint Hsan and officials.
In the afternoon, the Myanmar Tatmadaw goodwill delegation visited Yunnan Ethnic Village, located northwest to Kunming. First, the Senior General and party arrived at Tibetan Village and they were conducted by officials round the village and temple.
Next, the Senior General and delegation members studied Naxi Village, Bai Village, Yi Village and Dai Village where officials concerned gave an account of the ethnic traditional buildings, arts and handicrafts. Traditional songs and dances were also presented. Yunnan Ethnic Village features the customs and traditions of 25 ethnic groups and it is built with beautiful sceneries attractingalarge number of visitors.
The Senior General and party then visitedaplantation in Guo Lin village in Xi Shan region. In the plantation, strawberries are grown withatissue culture technique in greenhouses. They are created with the aromas of chocolate, blueberry, pineapple and milk. The plantation has grown strawberry of local and foreign species with the use of natural fertilizers made of mashed small fish. The growing of strawberry plants started in August this year and the fruits can be plucked in October. Withagood yield, the plantation has put three acres of land under strawberries. One acre can earn 30,000 to 100,000 Yuan.
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ထွက်ခွာ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့်
မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား
ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း)
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း နှင့် တာဝန်ရှိသူများက
နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက်စဉ်
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟို စစ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်၊ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် Gen. Fang Fenghui ၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာကြသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ရုံးမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မိုးမြင့်ထွန်း နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ စစ်သံမှူး Senior Colonel Wang Jinbo နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက် ကြသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် အတူ အဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး နှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ လိုက်ပါသွား ကြသည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ အကြီးအကဲများ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းရှိ အထင်ကရ နေရာ များအား လှည့်လည် ကြည့်ရှုလေ့လာ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by myawady at 10:07 AM No comments:
Myanmar Tatmadaw goodwill delegation led by Senior General Min Aung Hlaing leaves for China to pay goodwill visit
Senior General Min Aung Hlaing being seen off at Nay Pyi Taw
International Airport by officials.
At the invitation of member of the Central Military Commission of the People’s Republic of China Chief of the Joint Staff of the People’s Liberation Army of China Gen. Fang Fenghui,aMyanmar Tatmadaw goodwill delegation led by Commander-in-Chief of Defence Services Senior Ge-neral Min Aung Hlaing left Nay Pyi Taw International Airport yesterday morning.
The Myanmar Tatmadaw goodwill delegation led by Senior General Min Aung Hlaing was seen off at the airport by Deputy Commanderin- Chief of Defence Services Commander-in-Chief (Army) Vice-Senior General Soe Win, senior military officers of the Office of the Commander-in- Chief, Commander of Nay Pyi Taw Command Maj-Gen Moe Myint Tun, senior military officers, Ambassador of China to Myanmar H.E. Mr. Hong Liang, Military Attaché Senior Colonel Wang Jinbo and officials.
The Senior General was accompanied by Chief of the General Staff (Army, Navy and Air) General Mya Tun Oo and senior military officers of the Office of the Commander-in-Chief.During the visit, the Myanmar delegation will hold talks with heads of China and Chinese military leaders and pay visits to significant places in China.